Ny mpanokatra dia mamela anao hanokatra rohy amin'ny rindran-damina nahaterahany | Vaovao IPhone
Rehefa manokatra rohy amin'ny iPhone isika dia imbetsaka no mitondra antsika amin'ny tranokala na dia manana rindranasa mifandraika aza izahay. Ohatra, manokatra rohy Spotify dia manokatra Safari fa tsy manokatra Spotify. Apple dia afaka, ary heveriko fa tokony, manamboatra izany amin'ny ho avy, saingy tsy misy vahaolana teratany manan-kery amin'izao fotoana izao. Soa ihany fa misy fampiharana antsoina hoe Opener izay manao izay tokony hataon'ny iOS irery.
Ny Opener dia mampiasa fanitarana hetsika ahafahantsika manokatra rohy web amin'ny fampiharana azy. Tamin'ny voalohany dia natomboka ho mifanaraka amin'ny Twitter, Overcast, SoundCloud, Spotify, Kickstarter ary ny maro hafa, ahafahantsika mandeha ho azy ny fizotrany ary manokatra ireo rohy miaraka amin'ny fampiharana azy miaraka amina extension.
Raha ao anaty rindranasa afaka mizara rohy isika dia afaka manohina ny fanitarana Opener ary hahita varavarankely mipoitra misy safidy (pop-up) isika. Raha mifanandrify amin'ny rindranasa napetrakay ny rohy dia hahita lisitry ny safidy izahay, hikasika fampiharana iray izahay, hamaha ny rohy i Opener ary hitondra antsika any amin'ilay rindranasa zanatany.
ihany koa azontsika atao ny maka tahaka ny rohy misy an'ireo rindranasa izay tsy mifanaraka amin'ny safidin'ny iOS 8 ary manomboka ny Opener hanokatra haingana ireo rindranasa mifanentana. Ary raha manana rindranasa marobe mahavita mamaha an'io sehatra io izahay ary tsy te-hisafidy fampiharana isaky ny mandeha dia afaka mikitika ny iray amin'izy ireo mandritra ny segondra maromaro ary hamboarina ho fampiharana default ho an'ireo rohy ireo. Izy io dia azo ovaina avy eo amin'ny sehatry ny Opener.
Azo atao izany, toy ny nitranga tamin'ny fampiharana hafa, amin'ny ho avy izay anampian'i Apple ity mety ho iOS ity, tsy misy dikany ny Openera, fa amin'izao fotoana izao, ity fampiharana ity dia miasa tanteraka ary afaka mamonjy fotoana anao raha te hanokatra rohy izahay amin'ny rindranasa fampiharana, izay ilaina amin'ny fampiharana ofisialy sy antoko fahatelo. Izao dia izao, Manohana rindranasa 50 eo ho eo ny mpanokatra ary hanampy ho an'ny fampiharana bebe kokoa ny mpamorona azy atsy ho atsy.
Raha manokatra rohy maro ianao ary te hampiasa rindran-tany dia ny Opener dia fampiharana izay mampiasa an-tsaina ny fanitarana tonga amin'ny iPhone miaraka amin'ny iOS 8. Hita ao amin'ny App Store izy amin'ny vidiny € 1.99 ary fampiharana manerantany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » Mpisokatra: mampiasa extensions iOS 8 hanokafana rohy ao amin'ireo fampiharana anao
Ny fampielezan-kevitra doka vaovao nataon'i Samsung manohitra ny iPhone